Baro Python adoo adeegsanaya barnaamijyada | Laga soo bilaabo Linux
Maalmahan waxaan ku dhexjiray sunnayaasha iyo barashada barnaamijka Python, xitaa haddii ay tahay uun waxyaabo aasaasi ah.
En Xulka wararka oo dhan han daabacay hage kaas oo horeyba u lahaa 2 maqaal, oo muujinaya qaab lagu barto barnaamijka Python. Waxa ugu weyn ee ku saabsan maaddadan ayaa ah inay u horseedayso aragti iyadoo la adeegsanayo lana daabici doono Talaado kasta. Xaqiiqdii way mudan tahay in la hubiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku baro Python adigoo adeegsanaya barnaamij
Waad ku mahadsan tahay walaal faahfaahinta. Wax badan ayey iga caawin doontaa maadaama aan baran doono barnaamijyada qaarkood xitaa haddii ay tahay sidaad u leedahay "waxyaabaha aasaasiga ah".
Ku jawaab TiTan
Adaa mudan. Macluumaadka ayaa jira, kaliya waa inaan wadaagno 😀
Sida dheeraad ah oo aan rabin spam, sidoo kale waxaa jira hage aad u wanaagsan oo ka socda mundogeek (dot) com bogga pdf, waan akhriyay oo si fiican ayaa loo fahmay.
Muxuu yahay iskuxiraha? Python miyuu noqon doonaa qof walba?
Haa haa, taasi waa intaas, waxaan moodayay in si wanaagsan loo yaqaan, taasi waa sababta aanan uga tagin isku xirka tooska ah ee XD si aad ah ayaa lagula taliyay maadama ay ka kooban tahay macluumaad toos ah ilaa iyo inta ay ka koobantahay sida muujinta joogtada ah iyo qeyb ka mid ah la shaqeynta webka.
Dheeraad ahaan waxaa jira laba hagayaal oo aad arki karto.
1. - Laga soo bilaabo ftp of crackslatinos, casharro uu sameeyay RicardoNarvaja, oo aan wax badan ka bartay:
2. - Buug kale oo aan aqrinayo waa «Baro inaad u fakarto sida barnaamij oo leh Python». ilaa hadda waa mid aad u wanaagsan oo si fiican u faahfaahsan:
Waad ku mahadsantahay isku xirnaanta, hubaal waxay u adeegi doontaa in ka badan hal. 😀
Dabcan way u adeegeen, mahadsanid Jhals.
Waad ku mahadsan tahay wax walba Mudane elav. "Desdelinux.net" wuxuu ahaa (oo waa) taageero qiimo leh.
Fiiri tan 😀 http://pythonya.appspot.com/Sida ku saabsan hagaha mastersdelweb, ma jecli inay ku bilaabato khaladaadka ku jira koodhka iyada oo aan la soo bandhigin waxyaabaha aasaasiga ah. Laakiin qof kastaa wuxuu u adeegsadaa dhaqanka waxbarista sida uu u arko inay ku habboon tahay, in kastoo aysan macnaheedu ahayn inay waxtar leedahay, waa inaad aragtaa.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, wuxuu ka yimid 10.
Way booqan karaan goobta http://www.aprenderpython.org Waxaad ka heli kartaa casharro fiidiyow ah, dukumiinti dhammaystiran oo Isbaanish ah, maqaallo, madal, iwm.
Dhawaan waxay soo rogayaan casharrada fiidiyowga ee Python iyo MySQL, iyo maqaallo otomaatig ah.
Iyada oo leh terminaalka: Dhageysiga muusikada VLC